Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 38
Fahefana very hasina; hasina, itadiavana fahefana…
Par Taratra sur 09/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ahoana ihany izao toe-draharaham-pirenena izao? Olana ny fifandraisan’ny vahoaka sy ny mpitondra. Mipoaka izay niotrika ela. Endrika isehoan’izany ny fitsaram-bahoaka. Tsy matoky mpitondra intsony ny vahoaka? Na te hampiseho ny alahelony, na ny fisiany… Tsy nahoana tsinona izay ela izay? Na nitaraina aza, na niala nenina… Miseholany ny mahavery hasina ny fitondrana; na hoe ara-dalàna […]
Tsy mampandroso ny tahotra
Par Taratra sur 08/11/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny mampiavaka izao fitondrana izao ny tahotra fanakorontanana, tahotra fanonganam-panjakana. Mety ho fialokalofana koa amin’ny tsy fahombiazana izay, na fanamarinan-tena amin’ny fampiasan-kery. Soketaina avy hatrany ho manakorontana sy manongam-panjakana tsinona izay mihetsika rehetra. Halemena ny fampiasan-kery, fa saro-tahotra ho azy ny fitondrana malemy, tsy misy fototra. Tsy manana depiote hatrany am-boalohany, fa nailika izay niraisana […]